Fandikàna Iray Isaky Ny Mandeha, Tian’ity Mpanoratra Sady Mpiakatroka Ity Havotana Ny Fahalalàn’ny Tandrefana An’i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Fandikàna Iray Isaky Ny Mandeha, Tian'ity Mpanoratra Sady Mpiakatroka Ity Havotana Ny Fahalalàn'ny Tandrefana An'i Rosia
Voadika ny 06 Marsa 2016 17:03 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , Français, русский, Español, English
Bilaogin'i Thomas Campbell, The Russian Reader (Ny Rosiana Mpamaky ).
Tsy ny tantara rehetra no ho lasa lohatenim-baovao an-gazety, ary marobe ireo tavela miafina any ambadiky ny sakan'ny teny. Nanefa ny anjarany tamin'ny fanentsenana io hantsana io i Thomas Campbell , mpanoratra sady mpikatroka, monina ao St. Petersburg, tamin'ny alàlan'ny bilaoginy “The Russian Reader.” Ny herinandro talohan'ny 18 Febroary, nitsidika ny Anjerimanontolon'i New York i Campbell (NYU), ka tany no namaritany ny zavatra niainany tamin'ny fitantanana ny tranonkalany sy ny fanarahana maso ny tontolon'ny bilaogy Rosiana.
Fony vao nanomboka ny The Russian Reader i Campbell, ny taokanto sy ny kolontsaina ifotony tao St. Petersburg no nifantohany. Saingy rehefa nifandimby ny taona, lasa politika kokoa ilay bilaogy. Notononin'i Campbell ho fotoanan'ny fiolahana nanova ny asany ny fihaonambe tao amin'ny Kianja Bolotnaya tamin'ny faramparan'ny 2011 sy ny tohiny. Nahasondriana azy manokana ny raharahan'i Aleksey Gaskarov, izay, hoy i Campbell, natao lasibatra indrindra indrindra noho ny naha-mpikambana azy tamin'ilay hetsiky ny mpikatroka mpomba ny ankavia. (tamin'ny 2014, Gaskarov dia voaheloka ho nitarika korontana faobe ary nosaziana higadra 3 taona sy tapany tany aminà toby iray fanefàna sazy.)
Na hatramin'ny 2012 aza no efa manome fanehoankevitra politika momba ny fikatrohana ny The Russian Reader, sy momba ireo hetsika miainga avy any ifotony, ary adihevitra politika ao anatin'i Rosia , vao haingana mihitsy i Campbell vao nanao fanambaràna momba ny iraka tontosainy. Kendreny ny “hanome topimaso ho an'ny olona momba ny fiarahamonina Rosiana, izay maranitsaina, be herimpo, malalaka amin'ny fisainany, matanjaka, ary vonona ny hizaka dona eny an-tampon-doha (na izay ratsy indrindra) mba hanorenana firenena iray demaokratika, misy fitoviana, tsy manosika ireo LGBTQI, fatra-piaro ny tontolo iainana, mpandàla ny fampivoarana ny tanàndehibe, mpanohitra ireo mpankahala vahiny, mpandray mpifindra monina, ary zavatra hafa marobe.” Io lafy amin'i Rosia io, hoy i Campbell, no mazàna tsy ampy any anatin'ireo media Tandrefana mandeha làlan-jotra tokana rehefa manome sary momba an'i Rosia.
Lahatsoratra nadika avy amin'ny lahatsoratra nivoaka voalohany tamin'ny fiteny Rosiana no tena hita ao amin'ny The Russia Reader. Fantenan'i Campbell ireo tantara heveriny fa zara raha hita any anaty media Tandrefana, na tsy resahany mihitsy. Ny sasany amin'ireny tantara ireny no kely loatra eo imason'ireo media mahazatra (na ao Rosia izany na any Andrefana), saingy isisihan'i Campbell ny hoe na ny vaovao amin'izany habeny izany aza dia ampahany tsy misaraka amin'ny tantara ankehitrin'i Rosia. Ny sasany amin'ireny tantara “kely” ireny no miaty ny raharaha Valery Brinikh, izay voampanga ho nandrisika ny fanoratana tantara iray antsoina hoe “Ny Fahanginan'ny Zanakondry” momba ny fahasarotan'ny fandresena lahatra ny olona hanao hetsi-panoherana, ary ny tantaran'i Oleg Shevkun, ilay jamba mpamokatra lahatsoratry ny VOS radio, izay voaroaka noho ny nandefasany tao amin'ny onjampeo ny tsy fanekeny ny hetsika nataon'i Rosia tany Krimea.
Mandika ireo tantara fanehoankevitra ihany koa i Campbell, izay lazainy fa manasongadina ireo adihevitra mafàna amin'izao fotoana izao ao Rosia, na dia tsy fantatra be any Andrefana aza izy ireny. Ohatra, nandika andiana lahatsoratra izy, nosoratan'i Ivan Ovsyannikov, miresaka ny fironana miankavia na mankamin'ny nasionalisma, ary hatramin'ny lahatsoratra iray momba ny fanivanantena nosoratan'i Victoria Lomasko. Raha jerena ny hatevenan'ny asa (Ny “The Russian Reader” dia nanasongadina lahatsoratra 220 tamin'ny 2015), ary indraindray tadiavina i Campbell no mba mangataka fahazoandàlana avy amin'ny mpanoratra mba hahafahany mandika, fa mazàna mitsimpona ny lahatsoratr'izy ireny avy ao amin'ny tambajotra sosialy. Milaza izy fa te-hanorina “faribolan'ny mpikirakira sy mpamoaka lahatsoratra tsy an-tsitrapo” tahaka izany, ary hiankina amin'izy ireny amin'ny fanehoankevitra maharesy lahatra entin-dry zareo.
Asa famoahana lahasoratra aloha no tena ataon'i Campbell voalohany indrindra. Tsy hoe avy amin'izay zavatra nosoratany manokana no itantaràny tantara iray, fa avy amin'ny fandaminana am-pitandremana fatratra ireo vaovao efa misy. Ao anatin'ilay antsoina hoe “tantara fametapetahana”, alainy amin'ny fanakambanana ireo lahatsoratra sy matoandahatsoratra ny zeitgeist (fanahin'ny fotoana) amin'ireo pikantsarinà fifanakalozankevitra nitranga tety anaty tambajotra sosialy— toy ilay lahatsoratra iray momba ilay akaninjaza nankalaza ny Andron'ny Milisy tamin'ny fanehoana ireo sarin'ny ankizy miendrika ISIS mitazona fitaovampiadiana.
Manambatambatra ireo fantina lahatsoratra miresaka lohahevitra manokana ihany koa i Campbell. Ny antontan-kevitra avy aminy momba ny “pollocracy” (poll-ocracy, toy ireo fandalinana ara-piarahamonina, ijerena manokana ny resaka fitsapankevitra) ary ny fampiasàna ny fitsapankevitra ho toy ny fomba fampielezankevitra mikendry ny hanokafana ny maso sy hamafàna ny fiheverana hoe manohana tsy misy fepetra ny governemanta amperinasa ny Rosiana rehetra. Nandika ihany koa izy andiana lahatsoratra momba ireo mpiasa mpifindra monina, tamin'ny fiezahana ny hametraka ny maha-olona ireny olona ireny, izay amin'ny ankapobeny dia entina amin'ny fitondra feno setrasetra ao Rosia ao. Ary misy andiany iray ahitàna lahatsoratra momba ny hetsika fisorohana miainga eny ifotony any an-tanàndehibe ao St. Petersburg, toerana izay iresahan'ny mpikatroka ireo olana mazàna mitondra azy ireo hivadika ho mpanohitra ara-politika.
Ambaran'i Campbell fa niezaka izy ny hampitombo ny bilaoginy tamin'ny fampidirana mpandika hafa, saingy lazainy fa hitany ho nisy “hantsana ideolojika” eo amin'ireo ” ankizy tanora izay mitady hamaroana amin'ny fanehoam-pijery”. Tsy afenin'i Campbell ny fitongilanany amin'ny ankavia, ary laviny ny hanome sehatra ho an'ireo mpanoratra heveriny fa nasionalista, tahàka ilay mpanao gazety, Yulia Latynina, sy ilay mpikatroka mpanohitra ny kolikoly, Alexey Navalny. Eto, mandresy ny safidin'ny tompony manoloana ny fanahin'ny fotoana (zeitgeist).
3 herinandro izaySerbia